အပြောင်းအလဲ (ကိုယ်တိုင်ဆွဲ ကာတွန်း) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » အပြောင်းအလဲ (ကိုယ်တိုင်ဆွဲ ကာတွန်း)
အပြောင်းအလဲ (ကိုယ်တိုင်ဆွဲ ကာတွန်း)
Posted by ရွာစားကျော် မင်းနန္ဓာ on Dec 20, 2012 in Arts & Humanities, My Dear Diary | 24 comments
အဲဒီ စကားလုံးလေး စိတ်ထဲရောက်နေတာ ကြာပြီ..
နှစ်ဟောင်းက နှစ်သစ်သို့ အပြောင်းအလဲ
မြန်မာပြည်ကြီး အပြောင်းအလဲရေစီးကြောင်းထဲ မျောတဲ့ ၂၀၁၀ ကတည်းကပေါ့..
၂၀၁၂ နှစ်ဟောင်းမှ ၂၀၁၃ နှစ်သစ်တစ်ခု မကူးခင်လေး..
ဟော ခုလည်း ပြောနေကြပြန်ပြီ ပြောင်းရုံတင်မကဘူး..
မြန်မာပြည်နဲ့တင် ဆိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်.. ကမ္ဘာကြီးပျက်စီးမှာ….
ကမ္ဘာကြီး မနက်ဖြန် ပျက်တော့မှာဆိုရင် ဘာလုပ်မလဲတဲ့ တို့ သူကြီးကလည်း မေးနေတယ်..
အဲဒီတော့ ကျုပ်လည်း ကမ္ဘာမပျက်ခင် ဘာလုပ်ချင်လည်း တွေးကြည့်တော့ မန်းဂေဇက်မှာ တင်မယ်ဆိုပြီး ကာတွန်းလေးတွေ လျှောက်ဆွဲထားတာ
တကယ်လို့များ မနက်ဖြန် ၂၁-၁၂-၂၀၁၂ ရက်နေ့ တကယ်များ ကမ္ဘာပျက်ခဲ့ရင် ကျုပ်ကာတွန်းပုံလေး ပို့စ်မတင်လိုက်ရမှာစိုးလို့ စတိ (၁) ပုံ အရင်တင်လိုက်တယ်ဗျာ..
ရုံးမှာစီမံခန့်ခွဲမှုပုံစံတွေ ပြောင်းရတော့မယ်ဆိုပြီး အသံတွေ ထွက်တုန်းက အားချင်းလုပ် ကြုံရတဲ့ အကြောင်းလေး ဆွဲထားတာ… တခြားပုံလေးတွေလည်း ၂ ပုံလောက်ဆွဲထားတာရှိသေးတယ် ။ အပြောင်းအလဲနဲ့ ပတ်သက်လို့ ။ အစီအစဉ်က ပုံဆွဲဖြစ်တဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတွေလည်း ရေးပြီး ပို့စ်လှလှလေး တင်မလို့.. ရေးတာက အပြီးမသတ်နိုင်သေးလို့..
ခုတော့ မနက်ဖြန် ကမ္ဘာပျက်သွားရင် မတင်လိုက်ရမှာစိုးလို့ ဒီအတိုင်း လွှတ်လိုက်ပြီ…
ပထမဆုံး ကွန်မင့်ပေးသွားတဲ့ မိုဘိုင်းရေ ကျေးဇူးကွာ
မနက်ဖြန် ဘာဖြစ်မလဲ မသိနိုင်တော့ ဟဲဟဲ.. ဒီည ကိုယ့်ကာတွန်းလေး ဘယ်သူ ဘာပြောသလဲ ထိုင်ကြည့်နေရ ကောင်းမလားးးးးး
ကောင်း ပါ့ .
သူငယ်ချင်းနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး..ကာတွန်းလေးတွေ.ဆွဲ ပြီးတင်ပြဖို့ ကြိုးစာေးပမယ့်..
အခုထိ အကောင်အထည်မပေါ်နိုင်သေးလို့ ..
ကာတွန်း ငတ် နေချိန်မှာ..
ကာတွန်းလေးက စကားလုံး ..ထိထိမိမိနဲ့ ..
ပုံလေးက လက်ရာလည်းကောင်းလှတာမို့ ..
ဆရာတွေကလည်း ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ ဆွဲထားသမျှ အသစ် အဟောင်း အကုန်တင်ပေးထားကြတယ်
တခါတလေ ဂျာနယ်မထွက်သေးဘူး ကိုယ်တွေက ဘယ်မှာဆွဲထားတယ်ဆိုပြီး ဖတ်ရပြီးသား..
အပြောင်းအလဲဆိုပြီး …ပြောင်းလဲအောင်.. ပြောင်ပြပြီး.. ပြောင်းရုံနဲ့မရ..
လူတွေပါလဲရမယ်.. မလဲချင်ရင်.. လှဲချလိုက်…
လှဲမချရင်.. လဲကျအောင်…. ကန်ချရလိမ့်မယ်..။
သင်ဆွဲ ဆွဲကြည့်တာပါဗျ.. ဆက်ကြိုးစားပါ့မယ်
ပထမဆုံး ကာတွန်းပုံပါ.. ရွာစားဆိုတဲ့ ပုံထဲက လက်မှတ်တောင်
ဒီပုံဆွဲပြီး ဘယ်လိုလက်မှတ်ထိုးရင်ကောင်းမလဲ စဉ်းစားပြီး စထိုးလိုက်တာ
ဦးလေး ရှင်မွှေးလွန်းနဲ့ မင်းနန္ဒာ တို့ ပုံလေး ဆွဲပေးလေ လက်ရာကောင်းတယ်
ရှင်မွှေးလွန်းနဲ့ မင်းနန္ဒာ တို့ ဇာတ်လမ်းက အလွမ်းဇာတ်ကြီး မဆွဲချင်ဝူးးးး
ရှင်မွေးလွန်းနဲ့ မင်းနန္ဓာအကြောင်းဆိုရင်တော့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ဗိုက်ချမ်းသာနေဘီ ဓာတ်ပုံပြရမလား
ခေတ်ရဲ့သရုပ်မှန်ကို လိုရင်းတိုရှင်း နဲ့ထိထိမိမိ တင်ပြနိုင်တာ ကာတွန်းလေးတွေပါ..
ကာတွန်းလေးက အနော်တို့ရုံးက အဖြစ်ပျက်လေးနဲ့ နည်းနည်းတိုက်ဆိုင်နေသဗျ…… ကာတွန်းလက်ရာများကို ၀င်ရောက်အားပေးသွားပါတယ်ခင်ဗျ……
ဟုတ်ပါတယ်ဗျို့ … ကျွန်မကိုလည်း ဖြစ်နိုင်ရင် ကာတွန်းပုံလေးဆွဲပေးပြီး အလုပ်စားပွဲနားမှာ ကပ်ထားချင်ပါတယ် … ကျွန်မတို့အလုပ်မှာလဲ ဒီလိုပဲ … နှစ်ပြားတစ်ပဲ နှစ်ယောက်တပိုင်းနဲ့ မနိုင်ဝန်တွေ ထမ်းအခုမှ အသဲအသန်လုပ်နေပါတယ် ……….
ကိုရွာစားကျော် က ကာတွန်းလည်း ရတယ်လား…
အပြောင်းအလဲကို ညတွင်းချင်း လုပ်နိုင်တယ်။
ကာတွန်းတစ်ကွက်မှာ ပေးချင်တာကို စာနဲ့ ပုံနဲ့ သရုပ်ဖော်ရတာ မလွယ်ကူလှပါဘူး။
အားပေးပါတယ် ရွာစားကျော်ရေ။ :hee:
ကွန်မင့်မတင်ခင်က မမ ပြောထားတာမပေါ်သေးဘူး
တင်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ မမ ရဲ့ ကွန်မင့်က အပေါ်မှာရောက်နေပြီး
ဟုတ်ပ မမ ရေ .. ပြောင်းမပေးတုန်းကလည်း သူတို့
ပြောင်းမလို့ လုပ်တော့လည်း လောလိုက်တာ မပြောပါနဲ့တော့
မဆူး တို့ကို ကျေးကျေးပါနော်..
ကိုရွာစား က ကာတွန်းလည်း ရတာပါပဲလား။ လူကြီး နား နေရတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေ ရဲ့ အဖြစ် ကို ကွက်ကွက် ကွင်း ကွင်း မြင်လိုက်ရ တာပဲ။
တစ်ခါက ကာတွန်းဆွဲကြဖို့ ပြောတဲ့ ပို့စ်လေးတောင် သတိရမိသေး။ကိုကမ်းဝေးလည်း ကာတွန်းမဆွဲအားတော့ဘူးထင်ပါ့။
သားကလေးဆီက အိုင်ဒီယာတွေလည်းယူရင် ဆွဲစရာကုန်ကြမ်းတွေ အများကြီးရမှာ။